साइको - Himal Sanchar
शिशिरको सिरेटोले बाहिरी काठमाडौंलाई चिस्याइरहेको थियो । तर, रंगमञ्चभित्रको बन्द प्रेक्ष्यालयमा निरन्तर ‘वार्म-अप’ र स्टेजको लाइटले ज्यान बाफिलो थियो । नाटकको रिहर्सल सकाएर सरासर रुम फर्किएँ ।
दिनभरिको अभ्यास, को-आर्टिस्टको ढिपी र निर्देशकको अनेक निर्देशनले मन त्यसै भारी थियो । खाना पकाउन जाँगर चलेन । तातोपानी उमाल्न बसालें । फेसबुक ‘लग इन’ गरें । स्टाटस राखें, ‘बलेको आगो सबैले ताप्छन् ।’
‘निभेको आगो कसले ताप्छ र !’
केहीछिनमै उनको ‘हाहा रियाक्ट’सहित पहिलो कमेन्ट आयो । मलाई त्यसमाथि टिप्पणी गर्न मन लागेन । केवल ‘एंग्री रियाक्ट’ गरेर ग्यास बन्द गरें । स्टिलको गिलासमा तातो पानी खन्याएर टेबलमा राखें । ओछ्यानमा पल्टिएँ । उनको कमेन्ट दोहोर्‍याएर पढें । उदेक लागेर आयो । मनमनै रिस उठ्यो । इनबक्समा म्यासेज गरें- ‘निभिसकेको आगो म ताप्दैछु ।’
उनले मेरो पोष्टमा, त्यो पहिलोपल्ट कमेन्ट गरेकी थिइनन् । कुराकानी पनि खासै भएको थिएन । मैले एकचोटी उनको जन्मदिनमा शुभकामना दिँदा प्रतिउत्तरमा थ्याङक्युको छोटकरी ‘टीक्यू’ मात्र लेखेकी थिइनन् । हाम्रो ‘चिटच्याट’ यत्ति हो भन्दा हुन्छ ! हामी फगत फेसबुके साथी थियौं ।
उनी अनलाइनमै रैछिन् । तुरुन्तै म्यासेज सिन भयो तर उत्तर दिइनन् । मैले पुनः दुईवटा प्रश्न चिन्ह पठाएँ ।
‘सरी केही बुझिनँ’, उनको उत्तर आयो ।
‘आफू नमरी स्वर्ग देखिन्न’, मैले लेखी पठाएँ ।
‘छ्या… रंगकर्मीको भाषा बुझ्नै गाह्रो’, उनको रिप्लाई आयो । गिलासको पानी अझै मनतातो थियो । एक घुट्की पिएँ अनि सिरक ओढेर गुटमुटिएँ ।
मोबाइलमा म्यासेजको टोन बज्यो । हत्तपत हेरिहालें ।
‘आजभोलि के नाटक चल्दैछ तपाईंको ?’
जे होस् मेरो बारेमा थोरबहुत भेउ रहेछ उनलाई ।
‘योनीश्रावमा छट्पटिएका पशुहरू’
मैले नाटकको शीर्षक हतारमा लेखिदिएँ । उनले इमोजीसहित पठाइन्, ‘छ्या… कस्तो टाइटल ?’
म शब्द-संकटमा परें । उनले पुनः प्रश्न गरिन् ‘आम्मा…टाइटल नै यस्तो छ ! कथावस्तु कस्तो होला ? ‘
‘यौनका लागि छटपटिएका मनुपिशाचहरु र त्यसले हाम्रो समाज र मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव’, लेखी पठाएँ ।
उनले जानीजानी हेरिनन् अथवा हेर्न ढिलो गरिन् । उनको जवाफ पर्खिएँ तर उताबाट कुनै चालचुल भएन । त्यसपछि म्यासेज ‘रिमुभ’ गरिदिएँ ।
‘के डिलिट गरेको ?’ उनलाई शायद कौतूहल थियो ।
‘केही नाइँ !’
लेख्नु त धेरै थियो तर लेखिनँ ‘वाइफाइ अन’ छोडेरै मस्तले निदाएँ ।
बिहान उठें । उनले साना-तिना प्रश्नहरुको संग्रह नै पठाएकी रैछिन् । प्रत्येक प्रश्नको एक-एक गरी ‘रिप्लाई’ गरें ।
हामी हरेक दिन बोल्न थाल्यौं । बिहान उठेदेखि राति ननिदाउन्जेलसम्म गन्थन-मन्थन भइरहन्थे । शायद हाम्रो सम्बन्धको बहिखातामा अनेकानेक विवरण भरिँदै गइरहेका थिए । ओहो ! हामी बोल्न थालेको पनि एक हप्ता भइसकेछ । छोटो समयमै हामीबीच प्राय:नाटक, सपना, समाज, विभेद, दर्शन, परिवार अनि प्रेमका कुरा हुन्थे ।
शहर अँध्यारोमा लुप्त हुँदै थियो । नाटकघरबाट कोठा फर्किसकेको थिएँ । शिरमा भएको ‘रेड क्याप’ खोलेर टेबलमा राखें । भित्तामा झुण्ड्याइएको ऐना हेरें । मुसुक्क हाँस्न मन लागेन । ऐनाले मेरो हविगत बताइरहेको थियो । उनलाई म्यासेन्जरमा भिडियो कल गरें ।
‘आबुई’ मलाई देखेर तर्सेजस्तो गरिन् या साँच्चिकै तर्सिन् !
‘के भो ?’ मैले टाउकोतिर हात लाउँदै सोधें ।
‘तपाईको कपाल कसरी झरेको ?’
‘झरेको होइन यार! जन्मजात यस्तै हो !’
‘कपाल झर्नेहरु भाग्यमानी हुन्छन रे !’
‘त्यै त, हे भगवान ! यत्ति भाग्यमानी नबनाऊ’
फोन आकस्मिक ‘डिसकनेक्ट’ भयो । ट्राई गरें, गएन । फेरि, फेरि ट्राई गरें । मेरो केही सीप चलेन । त्यसपछि नम्बरमा कल गरें, रिङ गयो तर फोन उठाउन केही समय लगाइन् ।
‘हेल्लो …उम्, भन्नु न’
उनले थोरै बोलिन् । नम्र भएर मैले भनें, ‘पर्सिबाट हाम्रो नाटक मञ्चन हुदैंछ ! भोलिचाहिँ ग्राण्ड रिहर्सल हो ।’
मलाई यति थाहा छ कि म सबैभन्दा अगाडि आफूले आफैंलाई क्रुरताको हम्मरले हानेर मार्न सक्छु र त्यसपछि तिमीलाई…। लेखेर पठाइदिएँ । शायद ममाथि नाटकको पात्र हाबी हुँदै थियो ।
उनले मन नलागीनलागी बोलिन क्यारे !
‘म एक दुई दिन थिएटरमै व्यस्त रहन्छु’, मैले भने ।
‘व्यस्त हुनु राम्रो हो नि’, उनको जवाफ थियो ।
‘हैन, मैले योपालि क्यारेक्टरमा काम गर्न सकिरा छैन’, खिन्न भएर म बोलें ।
‘कस्तो क्यारेक्टर पोट्रे गर्दै हुनुहुन्छ ?’ उनले सोधिन् ।
‘नाटक हेरेपछि थाहा भैहाल्छ नि’ मलाई आफ्नो चरित्रबारे बोल्नै मन लागेन ।
‘नाटक गर्नेहरुको नाटकै बढी ?’
यो कस्तो शाब्दिक उपेक्षा, उफ…! मलाई ‘अन्प्रेडिक्टेबल’ लागिन् उनी ।
त्यैपनि सौहार्दताका साथ मैले निम्तो दिएँ ।
‘नाटक हेर्न चाहिँ आउनु ल’ ।
उनको लघुशब्द वा लघुवाक्यपछि मैले भनें, ‘हस् म अहिलेलाई राख्छु ल । नाटकपछि अलि फ्री भइन्छ । अनि मज्जाले बोलौंला ।’
‘ओके’ उनले भनिन् ।
मैले युट्युबबाट भक्तराज आचार्यको गीत बजाएँ- हजार सपनाहरुको माया लागेर आउँछ
एक्कासी ढोकामा ढकढक आवाज सुनियो ।
‘को हो ?’ भित्रैबाट म कराएँ ।
‘दाइ म पल्लो कोठामा बस्ने निर्मल भाइ बोल्यो ।
‘कलाकारहरु यस्तै हुदाँ रै’छन्’ ।मैले ढोका खोलें । निर्मलले खाना रुममै ल्याइदियो । म फ्रेस भएर खाना खान थालें । भक्तराजले गीत गाइरहेका थिए । म्यासेन्जको घन्टी बज्यो । एकोहोरो म्यासेजको घन्टीले गीतलाई ओझेल पारिरहेको थियो । थाल टेबलमा राखें । हात धोएँ । सिरानीमा अडेस लाएर मोबाइल समातें ।
प्रश्नहरुमाथि एकोहोरो प्रश्न । उफ…!
‘कस्तो ?’ मैले प्रश्न गरे ।
‘यस्तो’ उनले पठाइन ।
‘यस्तो भनेको कस्तो ?’
‘जस्तो तपाईं हुनुहुन्छ’
‘म कस्तो छु ?’
‘मन लाको बेला बोल्ने नत्र नबोल्ने’
‘त्यो त मानवीय स्वाभाव हो नि’ मन नलागी नलागी पठाएँ ।
‘त्यै भएर साइको लाग्छ’
‘को ?’ मैले लेखें ।
‘साइको फिल्म हेरेकी छौ ? हिच्ककको ?’ मैले सोधें ।
‘हेर्दिन म फिलिम सिलिम’ मेरो प्रश्नले शायद हिजो लागेछ ।
‘किन ? ‘मैले यत्ति भने ।
उनको उत्तर आएन । त्यसपछि मैले फोन अफ गरें । ओहो ! भात त हिउँ भइसकेछ । टेबलमा भएको नाटकको स्क्रिप्ट समातें। आफ्नो पात्रमा हराउन थालें ।
‘ओए साइको आजबाट नाटक शुरु हैन त ?’ एकदिनको अन्तरालमा उनको म्यासेज आयो । तर, एकाबिहानै उनको क्लिसे म्यासेज देखेर एकतमासले रिस उठ्यो ।
‘मसँग यस्ता ‘तड्या’ कुरा गर्दै नगर ।’
‘के हो यो ‘तड्या’ भनेको?’ उनले आज निहुँ खोजिरहेकी थिइन् ।
‘जे सुकै होस्’
‘अर्थ नै भेटिन मैले त’ उनले शायद ‘डिक्सनेरी’ हेर्न भ्याइसकिछिन् ।
‘सबै कुराको अर्थ नभेटिन सक्छ’
‘कस्तो तड्या मान्छे तपाई त’ मेरै शब्दले मलाई नै प्रहार गरिन् ।
उनले जिब्रो निकालेको ठूलो इमोजी पनि सँगै पठाइन् । मलाई भने झनझन् रिस उठ्न थाल्यो ।
मैले क्लिष्टताको साथ यस्तो लेखेर पठाइदिएँ ।
‘मनचिन्ते, घुमन्ते, फिरन्ते, मगन्ते, कल्पित, कपोकल्पित, अर्धकल्पित, मनोकल्पित, बकुम्फुसे, पढन्ते, मनगढन्ते कुराहरू मसँग गर्दै नगर ।’
‘किन ?’ उनको उत्तर आयो ।
‘किनकी म साइको हुँ । साइको…। मभित्र तीक्ष्ण विचारहरूले आक्रमण गरिसकेका थिए ।
‘छ्या ?’ उनले एक शब्द मात्र पठाइन् ।
मैले हातका औंलाहरुलाई रोक्न सकिनँ
‘के को छ्या… मलाई थाहा छ कि तिमी अर्डिनरी मान्छे हौ र म एक्स्ट्रा अर्डिनरी । मलाई यति थाहा छ कि म सबैभन्दा अगाडि आफूले आफैलाई क्रुरताको हम्मरले हानेर मार्न सक्छु र त्यसपछि तिमीलाई…।’ लेखेर पठाइदिएँ ।
शायद ममाथि नाटकको पात्र हाबी हुँदै थियो ।
‘औकात देखाउनु भो हैन…छ्या… यस्ता साइकोप्याथिकसँग मलाई बोल्नु छैन ।’ उनले दिक्दारिताका साथ कडा प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘एस ! आईएम साइकोप्याथिक पर्सन, इभर बर्न अन दिस प्लानेट विथ कम्लिकेटेट माइन्ड’ लेखेर पठाएँ तर म्यासेज गएन ।
म्यासेन्जरको सेतो स्क्रिनमा, खरानी अक्षरले लेखिएको थियो- ‘दिस पर्सन इज अनअभाइलेबल अन म्यासेन्जर ।’
Published 03.04.2021 By Acharya123himal
Categorized as English, National, नेपाली साहित्य, भीष्म जोशी, राष्ट्रिय समाचार, साहित्य
५० वर्षदेखि ‘अभिव्यक्ति’ हाँकिरहेका सर्जक
Tilicho lake coated with white background